Cadaadiska hoos u dhaca dulsaarka Mareykanka | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Cadaadiska hoos u dhaca dulsaarka Mareykanka
Jose recio | | Siyaasadda Isdhaafsiga, Siyaasadda dhaqaalaha
Toddobaadkan waxaa dhici doona kulan muddo dheer la sugayay oo ka socda Bangiga Dhexe ee Mareykanka (FED) kaas oo dulsaarka hoos loo dhigi karo. Tani waa ugu yaraan ujeedka madaxweynaha hadda ee Mareykanka. Donald Trump yaa riixaya in tallaabadan la dhaqan geliyo. Xilli daruuro madoow ay ku soo fool leeyihiin dhaqaalaha caalamiga iyo in kasta oo waxqabadka wanaagsan uu ka jiro Mareykanka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, dhamaadka usbuuca waxaa jiri doona go'aan, dhinac ama dhinac kale.
Waxay noqon doontaa go'aan kaas oo saameyn toos ah ku yeelan doona suuqyada sinnaanta. Labadaba dhinac iyo dhinaca kale ee Atlantic iyo kumanaan iyo kumanaan maalgashadeyaal yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah ayaa la sugi doonaa. Si go'aan looga sameeyo haddii ay habboon tahay iyo in kale fur ama xiro boosaska suuqyada kala duwan ee sinnaanta. Si sax ah xilli kaydka adduunku u rogi karo isbeddelladooda hadda. Taas oo ay lagama maarmaan noqon doonto in la beddelo istiraatiijiyadda maalgashiga si loo hagaajiyo howlaha.
Dhanka kale, waa in la ogaadaa in go'aankan Mareykanka ee keydka federaalka (FED) uu sidoo kale saameyn ku yeelan karo siyaasadaha lacagta ee aagga euro. Inkasta oo dareenkan, waxay horey u muujiyeen in dulsaarku uusan isbeddeleyn, ugu yaraan illaa qeybta hore ee sanadka soo socda. Sababtoo ah rajada liidata ee koritaanka dhaqaalaha aagga euro sannadaha soo socda. Halka qiimaha lacagtu uu marayo heerarkiisii ​​ugu hooseeyay sanadihii la soo dhaafay, si hufan 0%. Taasi waa, lacagtu wax qiimo ah maahan oo tani waa wax sidoo kale saameyn ku leh qiimaha saamiyada.
1 Kordhinta qiimaha ee Maraykanka
2 Sidee ayey saameyn ugu yeelan doontaa suuqa saamiyada?
3 Saameyn yar
4 Isbeddel ku yimid isbeddellada tusmooyinka
5 Xulo kaydka difaaca
6 Soo saarista dammaanadaha aagga euro
Kordhinta qiimaha ee Maraykanka
Dareenkaan, waa in la xusuusnaado in Mareykanku uu kor u qaaday dulsaarkiisa 0,25 dhibcood, laga bilaabo 2% ilaa 2,25% sanadkii aad hada kujirto. Heerarka dulsaarku waa mid ka mid ah aaladaha ugu awooda badan bangiyada dhexe ee gacantooda ku jira si ay u fuliyaan siyaasadooda lacageed. Sababaha kale awgood, sababtoo ah kororka dulsaarka ayaa u adeegta xakameynta sicir bararka iyo ilaalinta lacagta, iyo howlaha kale. Sidaa awgeed muhiimadda ay leedahay cabbirka uu kaydka federaalka ee Mareykanka qaadan karo toddobaadkan.
Lama iloobi karo in kala duwanaanshahani uu yahay kii ugu horreeyay ee dhaca tan iyo Sebtember 27, 2018, markii Bangiga Dhexe uu kor u qaaday heerka dulsaarka ee 0,25, taasoo gaadhay heerarka 2%. Haddii hoos u dhaca dulsaarka waxaa lagu qaadi karaa xoogaa ah rubuc dhibic si loogu soo celiyo heerarka 2%. Joojinta xoojinta weyn lama filayo maadaama ay si aad u liidata u heli karaan maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe. Gaar ahaan maxaa yeelay waxay tilmaamaysaa in hoos u dhaca dhaqaale uu ka sii xumaan karo inta ay filayaan falanqeeyayaasha maaliyadeed.
Sidee ayey saameyn ugu yeelan doontaa suuqa saamiyada?
Mid ka mid ah arrimaha sida weyn u daneeya maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexe waa saameynta ay ku yeelatay cabirkan lacageed suuqyada sinnaanta. Dareenkan, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan inaysan saameyn xoogan ku yeelan doonin indhoolayaasha suuqyada saamiyada ee aduunka. Waxaa laga yaabaa in muddada gaaban dhaqdhaqaaqyada qaarkood, kuwa wax iibsanaya ama kuwa wax iibiya, ay horumarin karaan inay caadi ku soo noqdaan maalmaha soo socda. Halkee, markale, waxay noqon kartaa qiimayaasha waaxda bangiyada dhibaatada ugu xun ee saamiyada caalamiga ah. Sanad ay si cad uga dambeeyeen qeybaha kale ee ganacsiga, sida korontada.
Halka dhinaca kale, sidoo kale waa lagama maarmaan in la xoojiyo in qaybta maaliyadeed ay muujineyso sicirka ugu hooseeya taariikh ahaan. Laakiin waxay noqon kartaa qalad weyn in la furo boosaska maxaa yeelay qiimayaashoodu way ka hoos mari karaan xitaa sida ay xilligan yihiin. Marka laga eego aragtidan, lama dhihi karo qiimahoodu waa raqiis marka loo eego duruufaha caalamiga ah ee hadda jira. Maaha wax aan micno lahayn, way badan yihiin su'aalaha la xaliyo hadda ka dib. Sababtaas awgeedna ma jiri doonto wax la kala doorto oo aan ahayn inay ka maqnaadaan meelahooda ugu yaraan bilaha harsan illaa dhammaadka sanadka.
Mabda 'ahaan, hoos u dhaca sicirka dulsaarka ee Keydka Federaalka Mareykanka ayaa saameyn ku yeelan kara dhexdhexaad ah suuqyada sinnaanta. Laakiin waqti aad u xaddidan maaddaama loo yareyn karo xoogaa kal-fadhiyo ganacsi ah iyo in yar oo kale. Ilaa iyo inta hoos u dhaca ku yimaadda Mareykanku uu ahaa mid xoog leh oo aan laga fileynin falanqeeyayaasha maaliyadeed ee ugu waaweyn. Si kastaba ha noqotee, shaki kuma jiro in xaalad kale oo aad uga duwan tan lagu muujiyay macluumaadkan ay dhici doonto.
Waxaa jira sharci dahabi ah oo ka jira suuqyada saamiyada oo sheegaya in hoos u dhaca sicirka dulsaarku uu doorbidayo kororka suuqyada sinnaanta. Sababaha kale awgood, maxaa yeelay waxaa jira a xisaabin badan si loo sameeyo maalgashi hantida maaliyadeed ee kala duwan. Waxaa ka mid ah, iibsiga iyo iibinta saamiyada suuqa saamiyada. Waa kuwee, ka dib oo dhan, maxaa daneynaya maalgashadayaasha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Ka saraysa taxanaha kale ee tixgelinta farsamada iyo laga yaabee sidoo kale dhanka aragtida aasaasiga ah ee qiimaha suuqyada saamiyada.
Isbeddel ku yimid isbeddellada tusmooyinka
Si kastaba ha noqotee, wax walba waxay umuuqdaan inay muujinayaan in dib u soo noqosho lagu sameynayo suuqyada sinnaanta adduunka. Si aad uga gudubto bulish si aad u xanaaqdo, sida tilmaamayaasha qaarkood ee khuseeya gaarka ahi tilmaamayaan. Waxay noqon laheyd fursad si faa iideyso dadka leh maalgashigooda dhul wanaagsan. Gaar ahaan marka la eego imaatinka ciidaha xagaaga soo socda. Dhowr bilood oo aan runtii aheyn kuwo aad u xasaasi u ah kor u kaca weyn ee tusmooyinka kaydka si loo horumariyo. Haddii aysan ahayn wax iska soo horjeed ah, sidii dhacday sannadihii la soo dhaafay.
Halka dhinaca kale, waa inaan sidoo kale ku tashanno gaabiska cad ee ka jira dhaqaalaha ugu weyn adduunka. Waa wax aad loola yaabo in saamiyada ay ku sii jireen heerar sidan oo kale ah qeybtii hore ee sanadkan. Halkee, tusaale ahaan, Ibex 35 wali wuu taagan yahay kor ku xusan 9.000 dhibcood iyo dib-u-qiimeyn yar sannadkan. In kasta oo hoos u dhac ku yimid toddobaadyadii la soo dhaafay iska caabbinta ku hareeraysan 9.400 iyo 9.500 dhibcood.
Xulo kaydka difaaca
Marka loo eego aragtida qayb wanaagsan oo ka mid ah falanqeeyayaasha maaliyadeed, wax walbaa waxay umuuqdaan inay muujinayaan in ugu dambayn wadada hoose ay noqon karto qaraarka suuqyada sinnaanta. Sababtaas awgeed waxay kugula talinayaan xilalka qiyamka difaaca badan inay qaadan karaan habdhaqan ka wanaagsan kuwa kale. Si kastaba xaalku ha ahaadee, wax waliba waxay muujinayaan in leexashada hoos u muuqataa ay tahay arrin maalmo, toddobaadyo ama laga yaabee dhawr bilood. Waxay kuxirantahay doorsoomayaasha badan ee laga horumarin karo daqiiqadahan saxda ah taasina waxay noqon doontaa kuwa go'aamin doona xoojinta dhaq dhaqaaqyadan suuqyada dhaqaalaha.
Sidoo kale lama iloobi karo in saamiyada dowladu ay kujiraan heerkoodii ugu sareeyay ilaa iyo maalmo kahor. Hoosta a kor u kaca taasi waxay soo bilaabatay 2013 taasna ma joojin kor u kac ku yimaada mudadaas dheer. In kasta oo xaqiiqda ah in sixitaanka macquulka ah lagu sameeyay isbadal ku yimaada qiimahooda.
Soo saarista dammaanadaha aagga euro
Heerka kobaca sanadlaha ah ee dheelitirka deynta ee deynta ee ay soo saareen dadka degan aagga euro wuxuu ahaa 2,3 bishii Abriil 2019, marka loo barbardhigo 2,4% bishii Maarso, sida laga soo xigtay Bank of Spain. In kasta oo dhinaca kale, iyo marka la eego dheelitirka baaqiga ah ee saamiyada ku taxan ay soo saareen dadka deggan aagga euro, sicirka Kobaca YoY wuxuu ka yaraaday 0,4% ka diiwaangashan Maarso 2019 illaa 0% bishii Abriil.
Soosaarka guud ee dammaanadaha deynta ee dadka degan aagga euro wuxuu ahaa € 634,5 bilyan bishii Abriil 2019. Amortizations waxay ahaayeen 650,8 16,2 bilyan iyo arrimaha saafiga ahaa -2,3 bilyan oo euro. Heerka kobaca sanadlaha ee qaddarka amaahda deynta ee ay soo saareen dadka deggan aagga euro ayaa istaagay 2019% bishii Abriil 2,4, marka la barbar dhigo 1,8% bishii Maarso. Halkaas, heerka isdhaafka isdhaafsiga ee isku dheelitirnaanta deymaha muddada-dheer ee dulsaarka isbeddelka ayaa istaagay -2019% bishii Abriil 2,7, marka loo barbardhigo -XNUMX% diiwaangashan bishii Maarso. Heerka Kobaca YoY wuxuu ka yaraaday 0,4% ka diiwaangashan Maarso 2019 illaa 0% bishii Abriil.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Cadaadiska hoos u dhaca dulsaarka Mareykanka
Sidee loo maal gashadaa lacagta?
Lacag dhigashada si looga ag dhawaado sicirka hoose ee Yurub